नुन नै बिदेश को खान्छौं, कसरी स्वदेशको माया लागोस त ? — SuchanaKendra.Com
नुन नै बिदेश को खान्छौं, कसरी स्वदेशको माया लागोस त ?
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७५/५/१३ गते
धनुषामा जन्मेर उच्च अध्ययनका लागि चिन पुगेर बिगत २२ बर्षदेखि चिनमा बसोबास गर्दै आउनु भएका डा. राजीवकुमार झा, पेशाले बैज्ञानिक, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र क्यान्सर विशेषज्ञ हुन् । जन्म: २०३६ साल धनुषा प्रवाहा । सियान मेडिकल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ता । पित्तथैली क्यान्सरबारे विद्यावारिधि र पोस्ट डक । प्रान्तीय सरकारले झाको नाममा ‘चाइना नेपाल फ्रेन्डसिप मेडिकल रिसर्च सेन्टर अफ प्रोफेसर राजीव कुमार झा’ स्थापना गरेको ।
प्रान्तीय सरकारको तर्फवाट नेपालका लागि ‘नागरिक दूत’का रुपमा कार्यरत । सन् २०१५ मा चीन सरकारद्वारा ‘१०० ट्यालेन्ट’को उपाधि प्रदान । सान्सी सरकारद्वारा हालै सियान फ्रेण्डसिप अवार्डवाट पनि सम्मानित । प्रान्तीय सरकारले गठन गरेको बुद्धिजीवीहरुको संस्था ‘सान्सी इनोभेटिभ ट्यालेन्ट डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट’को अन्तर्राष्ट्रिय विभाग संयोजकका रुपमा कार्यरत ।
क्यान्सर सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, नेपाल र चीनबीच चिकित्सकीय अनुभव आदानप्रदानका साथै चीनको आर्थिक, सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध विकास र विस्तारको क्षेत्रमा क्रियाशीलताबारे ? अहिलेको विश्व र क्षेत्रीय परिवेशमा चीनसँग नेपालको सम्बन्धबारे ? चीनसँगका सन्धि, सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन अवस्थाबारे ? चीनसँग भौगोलिक पहुँच बिस्तार र आर्थिक सम्बन्ध बिकासको सम्भावनाबारे ? नेपालमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउने अवसर र सम्भावनाबारे ? चीनको महत्वाकांक्षी आयोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’बारे ? उनी नेपाल आएको तमसोमा ज्योतिर्गमयको लागि टीकाराम यात्रीले गरेको कुराकानीमा उनी भन्छन:-
जब मैले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट आई.एस्सी. सिध्याए त्यो बेलामा तराईका मानिसहरुलाई मात्र हैन पहाडी मुलका बासिन्दाहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्रका मानिसहरुलाई पनि चिनको बारेमा धेरै थाहा थिएन । भाषा-संस्कृतिका दृष्टिले भारत धेरै सजिलो हो हाम्रो लागि तर खर्चका दृष्टिले तुलनात्मक रुपमा भारतभन्दा त्यो बेलामा चिन सस्तो थियो । तराईबाट आएको मेरो परिवारलाई आर्थिक समस्या हुनु स्वाभाविक थियो । तराईका मानिसहरुको विहेवारी तराई वा भारतमा हुन्छ, किनकि त्यहाँ भाषा मिल्छ, रहन सहन मिल्छ ।
“चीनीयाँ राष्ट्रपति लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ घुमेर समय बर्वाद गर्न आउने होइन , नेपालको बिकाशको लागि ठुलो परियोजना दिन आउने हो तर यसको लागि हाम्रो तयारी खै ?”
तर चिन भनेको कम्युनिस्ट देश हो, जे गरे पनि गोली हान्दिन्छ, ६० बर्ष पुगेपछि पनि गोली ठोकेर मार्दिन्छ भन्ने हौवा थियो । तर वास्तवमा चिन त्यस्तो थिएन । फेरी सस्तोमा एमबिबिएसको पढाइ पूरा हुन्छ भने जाउँनत भनेर म अध्ययनका लागि चिन गएको हुँ । तर २२ बर्षसम्म म चीनमा बस्छु, र फस्छु भन्ने थाहा थिएन । किनकि म त्यहाँको कल्चरमा फसें । त्यहाँको कल्चर मलाई एकदम बैज्ञानिक लाग्यो, म फस्नुको अर्को कारण म त्यहाँको टेक्नोलोजीमा , विकासमा म फसें । त्यसबाट म नेपालका लागि केही गर्न सक्छु कि, केही गर्न त नसकियाला तर केही भन्न सक्छु कि भनेर म बिगत २२ बर्षदेखि त्यहाँ बसिरहेको छु ।
“ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई इतिहास मै एक नयाँ उचाई दिलाएका छन् जसको राम्रो नतिजा भबिष्यमा आउने छ”
म चीनमा जाँदा जियांग जेमिन सत्तामा थिए । मैले त्यहाँ तीनवटा राष्ट्रपतिको कार्यकाल देखें । जियांग हुँदाको फेज बेग्लै थियो । हु जिन्ताओ आउँदा बेग्लै थियो, २०१२ पछी सी जिंग पिंग आउनु भयो त्यसको फेज अर्कै छ । किनकी जियांग जेमिनको पालामा त्यति इकोनोमिक ग्रोथ भएको थिएन । हुन त् ४० बर्ष अघिनै उहाँहरुले ओपन पोलिसी त ल्याउनु भयो तर त्यो सुरुवाती फेजमा थियो । जियाँगले ओपन पोलिसी ल्याउँदा कम्युनिस्ट देशको सोसिअल अर्डरलाई बिगारेर डिसअर्डर गर्देलाकी भन्ने डर थियो । तर जियान्गले त्यो बेलामा भनेका थिए, जब हामीले झ्याल र ढोका खल्छौँ, त्यो बेलामा माहुरी मात्र आउदैन झींगा पनि आउँछ ।
“चीनीयाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकेर नेपाललाई बिकाशमा पछाडी धकेल्ने ठुलो षडयन्त्र हुदैछ”
मैले उहाँहरुलाई भन्ने गरेको छु, एसियामा तपाईहरु ठूलो राष्ट्र हुनुहुन्छ, शक्तिशाली राष्ट्र हुनुहुन्छ, पावरफुल हुँदै हुनुहुन्छ, त्यसैले एसिया प्रान्तमा तपाईको दायित्व पनि बढी छ । हामीजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई मिलाएर अघि लाने दायित्व पनि तपाईहरुमै बढी छ ।
सी जी पिंगको कार्यकाल थपिने सन्दर्भमा कुनै असन्तुष्टि देखिएन । कुनै देशमा विद्रोह हुने भनेको आर्मीबाट हो, उहाँले आफ्नो स्पिचमा सधैं भन्ने गर्नु हुन्छ- पीएललेले सधै कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्नु पर्छ । उहाँले आर्मीको सहयोग लिनु भयो तर पावर देखाएर हैन बरु आफ्नो कन्सेप्ट देखाएर, आफ्नो भिजन देखाएर हो । आफ्नो सपना देखाएर हो । जब पीएलले र कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन्छन चीनमा विद्रोह हुने सम्भावना नै छैन । विद्रोह पेरिफेरिबाट हुनसक्छ । जस्तै तिब्बत, सिन्ज्यांग बाट , किनकि यो पेरिफेरी हो ।
“नेपालको बिकाशको कायापलट गर्न र भारतको निर्भरता हटाउन चीनसंग सहकार्य नेपालको आबश्यकता”
नून जताबाट आउछ र त्यो नून खाइन्छभने त्यो नूनको सोझो पनि गर्नु पर्छ । मानवता भनेकै यही हो. त्यसैले २/३ बर्षमा नेपालमा एउटा नून फ्याक्ट्री खोल्ने मेरो योजना छ, कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउँला । नून यहीं उत्पादन गरेर सबै नेपाली जनतालाई आफ्नै उत्पादनको नून ख्वाउने मेरो उद्धेश्य रहेको छ । किनकि नमक हलाल र नमक हराम भन्ने छ नि, नेपालका लागि यत्तिको अपरच्युनिटी छ, त्यो खेर नजाला कि ?
नेपाल र चिन बीच उच्चस्तरीय भ्रमण हुने सम्भावना देख्छु तर नेपालमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार भए तापनि यो सरकार म चैं सधै अस्थीर नै देखिरहेको छु ।
चीनले नेपालबाट के चाहन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार डा. झाको सबै भनाई सुन्नका लागि भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस ।